Xisbiga Jamhuuriga oo xagaldaacinaya Trump - iftineducation.com
iftineducation.com – Labo musharax oo xisbiga Jamhuuriga ee dalka Maraykanka kula tartamaya Donald trump ayaa shaaciyay inay u midoobi doonaan sidii ay u xagal daacin lahaayeen Trump oo ah ninka ugu cadcad musharaxiinta Jamhuuriga.
Labadan nin ayaa sheegay in gobolada haray ee lagu tartami doono ay doonayaan in ay iska kaashadaan sidii ay xoogooda isugu gayn lahaayeen si ay uga guulasytaan Donald Trump.
Ted Cruz ayaa sheegay inuu dhimayo ololihiisa ku wajahan gobolada Oregon iyo New Mexico, halka John Kasich uu sheegay inuu fursad siin doono tartanka gobolka Indiana ka dhici doona.
Donald Trump ayaa ku dacwooday dhowr jeer in xisbiga uu wado qorshe isaga loogu diidan yahay inuu guulaysto.
Trump ayaa caan hadallo muran dhaliya, waxyaabihii aadka la isula dhexmaray waxaa ka mid ahaa siyaasadiisa ku aadan dalka ay dariska yihiin ee Mexico oo uu sheegay in uu darbi ka dhisi doono xadka ay la wadaagaan iyo waliba in uu ku baaqay in Muslimiinta laga mamnuuco dalka Maraykanka in ay soo galaan.